Két sắt mini loại nào tốt? Top 7 két sắt gia đình bán chạy nhất | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: Két sắt mini loại nào tốt? Top 7 két sắt gia đình bán chạy nhất | Muasalebang in Muasalebang
Kufanele uthenge mini ephephile Iyiphi elungele umndeni? Ama-safes ayinto yokuvikeleka yawo wonke amakhaya, wonke umuntu futhi aya ngokuya esetshenziswa izinkampani, amahhovisi, izindlu… Lokhu kuthathwa njengesixazululo esilungile sokukusiza ukuthi ugcine izimpahla namadokhumenti avikelekile. Kodwa-ke, akuwona wonke ama-safes avikelekile ngokwezidingo zakho ezinhle kakhulu, ngalesi sihloko, kufanele uzikhethele umugqa ohlonishwa kakhulu wama-safes!
IMIKHIQIZO EZIDISWA KAHLE KAHLE
1 A/ ISINGENISO SEZIMALI
1.1 1. Siyini isisefo?
1.2 2. Zingaki izinhlobo zezisefo ezikhona? Ukuhlukaniswa kwamasefa ngohlobo lokukhiya
1.3 2. Hlobo luni lwesisefo esihle? Ingakanani i-mini safe?
1.4 3. Isipiliyoni sokuthenga izisefo zomndeni
2 B/ YILUPHI UHLOBO OLUTHOLE KAKHULU LOKUVIKELA KWA-MINI MANJE?
2.1 1. I-Solid Safe – Kunconyiwe
2.2 2. Isisefo esincane esingcono kakhulu – i-Honeywell electronic safe
2.3 3. I-Viet Tiep Safe – Iphephile yezinga eliphezulu
2.4 4. Hanchi Fireproof Safe – Ukucabangela
2.5 5. Izigxivizo zeminwe zeTiger mini ziphephile
2.6 7. Hoa Phat Safes
A/ ISINGENISO SEZIMALI
1. Siyini isisefo?
Ngaphambi kokuya odabeni lwamasefa amancane, ake sifunde ngomqondo wama-safes. Lolu uhlobo lwebhokisi lokukhiya elenziwe nge-aluminium, insimbi noma insimbi, elikusiza ukuthi ugcine imali yakho, igolide, amadokhumenti ayimfihlo,… ngendlela ephephile, esongwe futhi eqiniswe ngezisefo ezivimbela ukweba noma izisetshenziswa.
Kuwo wonke umuzi, isisefo somndeni siyisicelo esibalulekile, esiqukethe imibhalo yomuntu siqu, imali echithwa emndenini, ukusiza abazali bazizwe belondekile lapho kungekho muntu ongena ngaphandle komnikazi.
2. Zingaki izinhlobo zezisefo ezikhona? Ukuhlukaniswa kwamasefa ngohlobo lokukhiya
Kunezinhlobo ezi-3 zezisefo emakethe, okuyizisefo zikagesi (ezisebenzisa amabhethri ukuzivula), izisefo zemishini (ezisebenzisa indlela yokuvula igama eliyimfihlo) kanye nezisefo zezigxivizo zeminwe (kusetshenziswa izigxivizo zeminwe zomnikazi) ukuze zivuleke), ikakhulukazi njengoba kuyalandela:
2.1. Ilokhi ye-elekthronikhi
Lolu uhlobo lwesisefo esisebenzisa amabhethri ukuvula umnyango ophephile, ingenye yezinhlobo ezine ezidume kakhulu zokukhiya namuhla futhi zisebenza ngamandla ebhethri. Ngalo mugqa wokhiye, uzokwazi ukushintsha ikhodi ngendlela ofisa ngayo.
2.2. Ilokhi evamile yokukhiya kanye nekhodi kushintsha ukukhiya komshini
Izisefo zokhiye bomshini azisebenzisi amandla ebhethri ukuze zivuleke, kodwa zisebenzisa indlela esebenza ngamagiya amakhulu angaphakathi. Lolu hlobo lwesisefo lunokuqina okuphezulu, ikakhulukazi ukhiye womshini oshintsha ikhodi ongayishintsha ngokuthanda kwakho, ngokufana nolayini wokukhiya we-elekthronikhi. Ngokuqondene nokhiye womshini ojwayelekile, ngeke ukwazi ukushintsha ikhodi kodwa kufanele usebenzise ikhodi enikezwe umenzi.
BONA IZINTENGO ZOKUTHENGISWA KWE-CHONASH SHOCKERS KU-LAZADA
2.3. Ilokhi yezigxivizo zeminwe
Kucatshangwa ngochwepheshe njengobuchwepheshe bokuphepha obuphezulu, obuhlakaniphe ngokwedlulele futhi butholakala kuphela kumasefa asezingeni eliphezulu, akukhona ukuqondana ukuthi izisefo ezikhiywe ngezigxivizo zeminwe zibiza kakhulu futhi zinamanani aphezulu. imindeni eminingi ifuna ukuzisebenzisa ngokuvula izigxivizo zeminwe zomsebenzisi. Isisefo sokukhiya izigxivizo zeminwe sinesici esivelele sokuvikeleka okuphezulu ukusiza abasebenzisi bangakhathazeki ngokulahlekelwa yikhodi. Ikhodi yokuvula izigxivizo zeminwe zomnikazi, ezilungele kokubili futhi eziqinisekisa ukuphepha okuphezulu komsebenzisi.
2. Hlobo luni lwesisefo esihle? Ingakanani i-mini safe?
Ngemigqa emikhulu yomkhiqizo, imakethe isukela ezigidini ezi-2 kuye kwezi-5 zama-dong, kuye ngohlobo nemodeli yesisefo. Intengo yezisefo ezincane zemindeni iphansi kunaleyo yezisefo ezinkulu, ngoba ziqukethe kuphela indawo encane njengemali, igolide, … nezinto ezincane. Intengo yalolu hlobo lwesisefo ivamise ukuguquguquka cishe ku-2 million VND. Ngaphezu kwalokho, eminye imigqa yemikhiqizo yezisefo ezithuthuke kakhulu ibiza amashumi ezigidi zama-dong.
Ngokuvamile, kuye ngohlobo lwesisefo, imuphi usayizi, ivolumu, umsebenzi ongashayi umlilo noma i-alamu yokulwa nokwebiwa okuhle? Yilokho okufanele ukhathazeke ngakho kakhulu kunenani layo.
3. Isipiliyoni sokuthenga izisefo zomndeni
Uma ufuna ukuthenga isisefo, udinga ukunquma inani lezinto ozozigcina kulo, uma kuyimali, kufanele uyibeke ebhange yisixazululo esingcono kakhulu! Uma kuyigolide, zithengele isisefo esiwusayizi omncane ngokushesha. Mayelana nemibhalo eyimfihlo ebalulekile, kufanele uhlose usayizi omkhulu wesisefo!
Ngokuya ngosayizi, kuye ngezidingo zakho kanye nesikhala sendlu yakho nehhovisi, ungaphokophela imikhiqizo yobukhulu oyibonayo! Ungalethi ikhanda elingenalutho ukuze uthenge isisefo, ngoba kamuva uzozisola ngokungacabangi kahle ngaphambi kokuthenga.
BUKA UMNIKELO WOKUVIKELA KOMNDENI KU-LAZADA
Ngesimo samanje sokweba, i-locker evamile ilula kakhulu kumasela aqeqeshiwe, kufanele ube nesisefo endlini yakho yokuvimbela umlilo, i-alamu, i-anti-theft, … Vikela impahla yakho ngendlela engcono kakhulu! Noma ngabe awukho noma ukhathazekile ngokuthi akekho ekhaya noma ehhovisi, isisefo sizokwehlisela lokho kungazethembi.
B/ YILUPHI UHLOBO OLUTHOLE KAKHULU LOKUVIKELA KWA-MINI MANJE?
1. I-Solid Safe – Kunconyiwe
Izisefo eziqinile okwamanje ziwumkhiqizo oshisa kakhulu, ophawulwe ovela e-Korea, oklanyelwe ukuhlanganisa imisebenzi eminingi ukuze kuvikelwe izimpahla ezingaphakathi kwesisefo.
Lezi zisefo eziqinile zinesisindo esikhulu kakhulu esisuka ku-32kg noma ngaphezulu, ngenxa yokuthi zibunjwe ngezingqimba eziningi, ngisho noma zishiswa futhi zishiswe kufika ku-100 degrees Celsius, zisagcina impahla yakho injalo.
BHEKA IMIKHIQIZO ESAYIPHEZULU LAPHA
Ukuhlolwa kwesisefo esiqinile kuhle?
Izisefo eziqinile zinevolumu enkulu, ngakho kufanele zigcinwe ekhoneni lekamelo lokulala, uma ikhethini limbozwe esisefeni, lifana netafula lefenisha, lisiza umnikazi ukuba azifihle ukuze agweme ukweba. Kodwa-ke, lolu hlobo lwezokuphepha lufanelekile kuphela kubanikazi bezindlu abanezinto eziningi ezinkulu, ukuze bakwazi ukuqukatha okwanele naphakathi. Ngokuqondene nabanikazi bezindlu abanendawo encane yamakamelo, azikho izinto eziningi ezifana negolide, imali, njll, kungcono ukuthenga isisefo esincane njengesixazululo esingcono kakhulu.
2. Isisefo esincane esingcono kakhulu – i-Honeywell electronic safe
Njengoba kushiwo ngenhla, inguqulo ye-Solid big size, okuphambene nayo kuyoba usayizi omncane we-Honeywell, kubanikazi abathanda abancane. Uma kuqhathaniswa nezinye izisefo, i-Honeywell iyindawo encane ephephile, enesisindo esingaba ngu-9.4kg kuphela.
Kodwa-ke, ububi balesi sisefo ukuthi zidizayinelwe ngembobo yesikulufu esinqanda ukunyakaza (ilungiswe kuphela endaweni eyodwa), futhi ayifakelwe isici esingashi.
BONA IMIKHIQIZO ENTENGISO ESHISAYO LAPHA
Ukubuyekezwa kwe-Honeywell safes kuhle?
Eqinisweni, izisefo zikagesi ze-Honeywell aziphatheki futhi azishi, kodwa abasebenzisi basazithanda ngenxa yokuphepha kwazo okuphezulu kakhulu, ngaphezu kwesici senkumbulo uma kwenzeka umnikazi ekhohlwa iphasiwedi. Emzimbeni wesisefo, kukhona isibonisi se-LED esakhelwe ngaphakathi ukuze abasebenzisi babone kalula noma bafihle ikhamera uma kudingeka.
3. I-Viet Tiep Safe – Iphephile yezinga eliphezulu
Okubizwa ngokuthi “okuphephile endaweni ephephile”, lona umugqa womkhiqizo ofanele amahhovisi noma izinkampani. Ngenxa yokuthi isisefo sinesisindo esisuka ku-55kg, ubukhulu buyi-50 x 40 x 40cm, ingaphakathi lihlukaniswe ngama-drill angu-2 ukusiza ukuvikela nokugcina izinto eziningi ezahlukene.
Izingxenye ze-Viet Tiep safe ziyakwazi ukumelana nomlilo, zimelana nezinga lokushisa elifinyelela ku-1000 degrees Celsius ihora elingu-1. Ngakho ngokubona kwakho, yiluphi uhlobo lwesisefo esincane esihle? Ngomklamo wokunethezeka kanye nomklamo oqinile, ngisho noma kukhona “umlilo endlini” noma “ukweba”, akekho ngaphandle komnikazi owaziyo lapho isisefo sesibili singaphakathi!
Ingabe i-Viet Tiep iphephile?
Iningi lamabhizinisi, amayunithi kanye nezinkampani zethemba imikhiqizo yohlobo lwe-Viet Tiep, ngoba inekhabethe elivikelekile okungekho muntu ongalithola. Ngaphezu kwalokho, isisefo esincane se-Viet Tiep sinokukhiywa komshini ovimbela ukubona (okungukuthi, ngokumelene nokuqagela igama-mfihlo), okuletha ukuthula kwengqondo kubasebenzisi. Kodwa-ke, lo mkhiqizo unenani eliphakeme kakhulu emakethe futhi ufanelekile kuphela kumabhizinisi aphakathi namakhulu, yiqiniso, uma unemali eyanele, zithengele i-Viet Tiep ephephile!
4. Hanchi Fireproof Safe – Ukucabangela
I-Hanchi futhi iyidivayisi yokufaka egxilile, kodwa inguqulo kasayizi omkhulu uma iqhathaniswa ne-Honeywell, umumo wonxande kanokusho nobukhulu obungu-50 x 38 x 36cm onesitendi. Umzimba wonke wesisefo uyinsimbi ejikijelwayo eyi-monolithic, impahla engashi, ekwazi ukumelana nokushisa okufika ku-1000 degrees Celsius ihora elingu-1. Uma uzibuza ukuthi hlobo luni lwezokuphepha oluhle futhi olunengqondo ngentengo, lokhu kuzoba isiphakamiso esiphelele kuwe.
Ingabe i-Hanchi fireproofs ilungile?
Ungaqiniseka ngempela uma usebenzisa lo mkhiqizo, nakuba umukhulu futhi uqinile, kodwa ama-safes e-Hanchi ahlangabezana nazo zonke izidingo zomnikazi. Ngaphezu kwalokho, inzuzo evelele yalesi sefa ukuthi izinsimbi ze-alamu zihlanganiswa endaweni ephephile, lapho izinto zingenwa ngaphakathi kwekhiye yokukhiya, zikusiza ukuthi usheshe uthole amasela. Izisefo ze-Hanchi okwamanje zibiza kakhulu, cishe izigidi ezi-3 ze-VND.
5. Izigxivizo zeminwe zeTiger mini ziphephile
Ngokuvamile, izinhlobo ezingu-4 zezisefo ezingenhla zonke ziyizisefo zemishini, ezisetshenziswa ngokuvula izinombolo, noma indlela yokudayela. Kusesefo seTiger, esisebenza ngogesi, iTouchID isetshenziselwa ukuyivula. Ngomklamo ohlangene ongaphansi kuka-10kg, ifanele abanikazi abathanda ukuhlanzeka nendawo enkulu. Sonke isisefo senziwe ngensimbi eyingxubevange engu-2.5mm, ugqinsi oluyi-10mm, yakhelwe kahle kuwo wonke amagumbi omkhiqizo. Ngakho-ke uma ungazitholanga isisefo esihle, lo mugqa womkhiqizo kufanelekile ukucatshangelwa.
Ukuhlolwa kwesisefo esincane sezigxivizo zeminwe ye-Tiger kuhle?
I-Tiger mini isisefo sezigxivizo zeminwe iyisisetshenziswa esihle esinganyakaziswa kalula. Lo mugqa womkhiqizo ulula ngesisindo, ngakho-ke kubonakala sengathi ungaphatheka, noma ufakwe ngendlela yentaba ekamelweni lokulala lomndeni, ihhotela, inkampani, … Ngaphezu kwalokho, i-angle yokubuka ebanzi yenza indawo ibe nempilo.
6. Goodwill safe deposit box
Ngemva kweminyaka ecishe ibe ngu-20 yentuthuko, i-Goodwill iyisiphephelo esidume kakhulu esinegama lase-Vietnamese namuhla, esakhiwe ngobuchwepheshe baseKorea kanye nezingxenye ezithunyelwa kwamanye amazwe ukuze zinikeze izidingo zasekhaya futhi zithekelise ezimakethe zomhlaba.
Ngomkhiqizo ophephile we-Goodwill, ungakhetha emikhiqizweni yosayizi abahlukene, enamakhikhi ahlukahlukene afana nezikhiya zemishini, izingidi zikagesi nezisefo ezihlakaniphile eziphathwa ngamaselula. ethandwa amakhasimende amaningi.
Iluphi uhlobo lwesisefo esihle? Izibuyekezo I-Goodwill Safes yinhle?
Akukona nje ukuqondana ukuthi izindawo eziphephile ze-Goodwill mini zithole indawo eqinile emakethe yokuphepha eVietnam. Ungazibona zivela ekhaya lakho, ebhange, ehhotela noma ehhovisi… Izisefo ze-Goodwill zigqama kakhulu kusistimu yazo ye-alamu ezwakalayo, umsebenzi ongashi ukuze usize ukumelana nokushisa, ukuphakama amahora amaningi, ukunciphisa umonakalo. Ngakho-ke, ungaqiniseka ukuthi ukhetha futhi waneliseke lapho usebenzisa lo mugqa womkhiqizo.
7. Hoa Phat Safes
Ebhekisela ku-Hoa Phat, wonke umuntu uyazi ukuthi lena yinkampani ehamba phambili ekukhiqizeni izimboni eziningi, lapho ifenisha nayo ingumkhiqizo oyinhloko waleli qembu. Ulayini we-Hoa Phat safes waziwa ngemiklamo yawo ehlukahlukene futhi ethuthukisiwe, ecebile ngemibala namasayizi, ngakho unamakhasimende amaningi okudla ngenxa yentengo yawo ephusile kodwa usaqinisekisa ikhwalithi.I-Hoa Phat iron inesisindo esilinganiselwe, hhayi esikhulu kakhulu, ukusuka cishe 50kg kuya ku-150kg.
Ukuhlolwa kwe-Hoa Phat ephephile kuhle?
Ngokuvamile, ama-safes e-Hoa Phat akhiqizwa ngekhwalithi yezingxenye ezingenisiwe. Amamodeli amaningi futhi anekhono lokumelana nomthelela, ukumelana nomlilo, uhlelo oluhle lokuvikela, njll. ukuze kuqinisekiswe ukuphepha kwempahla yabasebenzisi. Kodwa-ke, isisefo asiyona i-brainchild eyinhloko ye-Hoa Phat, ngakho-ke imigqa yomkhiqizo ephephile ayizange itshalwe ngokugcwele, ngakho-ke ikhwalithi ayiyona engcono kakhulu uma iqhathaniswa nemigqa yomkhiqizo. Nokho, lona kusewumugqa womkhiqizo ongacabanga ukuwukhethela umndeni wakho.
I-athikili engenhla ikusiza ukuthi uqonde ngokwengxenye ukuthi kubaluleke kangakanani ukuba khona kwesisefo emndenini wakho, kokubili okulwa nokweba, nokungashi ngenkathi uvikela izinto zakho ezibalulekile nempahla. Ngethemba ukuthi uzozithola uyisisefo esincane esihle, esinethezekile nesifaneleka!